मंसिर १९, काठमाडौं । स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत ओलीलाई अस्पतालले बिहीबार डिस्चार्ज गरेको हो । उनलाई दिउँसो ३ : ४५ बजे अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए।
अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटार निवासमै आराम गर्ने भएका छन् । ओलीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले केही दिन अस्पतालमै राख्ने सोच बनाए पनि उनले निवासमै गएर आराम गर्ने चाहना व्यक्त गरेपछि चिकित्सकहरुले डिस्चार्ज गर्ने निर्णय गरेको अस्पताल स्रोतले बतायो।
ओली डिस्चार्ज हुनुअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्पताल पुगेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझेकी थिइन्। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच करिब आधा घण्टा कुराकानी भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी केही दिन पहिला पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अस्पताल पुगेकी थिइन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा २ लाख ५४ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ खर्च लागेको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको उपचारमा २ लाख ५४ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ लागेको जानकारी दिए । सरकारी अस्पताल भएकाले प्रमको उपचारमा थोरै खर्च लागेको हो। प्रधानमन्त्रीको एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन खर्च १५ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको मनमोहन सेन्टरले जानकारी दिएको छ।
‘उहाँले अहिले पनि सरकार र पार्टीका बैठक राख्न सक्नुहुन्छ। दुई सातापछि त मंसिर १० अघिकै अवस्थामा फर्किनुहुन्छ,’ डाक्टर सिंहले भनिन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीको २-३ महिनाभित्रै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकिने बताइन्।
नेपालमा पनि मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण भइरहेकाले विदेश जानु आवश्यक नभएको सिंहले बताए। ‘अमेरिका र सिंगापुर सकभर जाँदैनौं,’ उनले भनिन्। डाक्टर सिंहले दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा केही जोखिम हुने भए पनि धेरैले सफलतापूर्वक दुई/तीन पटक प्रत्यारोपण गरेको बताइन्।
प्रा.डा. श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई डिस्चार्ज गरेसँगै नियमित निगरानीका लागि एकजना नर्स साथमै पठाइएको छ। ‘एपेन्डिसाइटिसपछि उब्जिएको समस्या निदान भइसकेको छ। हामीले निगरानीका लागि एकजना नर्स पनि पठाएका छौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘उहाँलाई आवश्यक परेका बेला फलोअप आउन सक्नुहुन्छ। केही परेमा हामी आफैँ बालुवाटार जान सक्छौँ।’
प्रा.डा. श्रेष्ठका अनुसार एपेन्डिसाइटिसपछि पेटको अपरेशनका क्रममा लगाइएको टाँका सबै खोलेर पठाइएको छ। ‘एपेन्डिसाइटिसको समस्या सबै ठीक भइसकेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘हामीले टाँका खोलेर पठाएका छौँ। अहिलेलाई कुनै खालको समस्या छैन।’
ओलीले भने : स्वस्थ भएँ
मनमोहन सेन्टरबाट बाहिरिने क्रममा प्रम ओलीले आफू ठीक भएको बताए। उनले उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुलाई धन्यवाद पनि दिए। ‘अब म स्वस्थ भएँ’, उनले भने, ‘मेरो उपचारमा संलग्न सबैजना धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।’